Imfihlelo yokuncipha komculi I-Glucose: iimpawu zokutya kunye nokuqeqeshwa kweenkwenkwezi
Umculi uGlukoza (Natalia Chistyakova-Ionova) uhlawula ingqwalasela eninzi ngokubonakala kwakhe, ngakumbi umzobo. Umdlali we-actress uthanda ukutshitshisa ababhalisile bakhe nge-Instagram kunye neefoto ezinobuncwane, ngaloo ndlela ukufudumala umdla kumntu wakhe. Ukuqwalasela le mizobo, unina onqabileyo weentombi zombini akanalo iingxaki ezibonakalayo kunye nobunzima obunzima, kodwa umculi uyavuma ukuba akahlali esonwabile ngumfanekiso wakhe.
Ngokukhawuleza uGlukoza waphinda wakhiphela isithuba apho azama ukuzithethelela phambi kokuba abhalisele kwifom yesimo esingapheleleyo. Umdlali wesicatshulwa wakhalaza ngeshedyuli yomsebenzi wokudubula kunye nokukhenketha, ngenxa yoko waqala ukukrazula iiklasi waza wacebisa abalandeli bakhe ukuba bangayeki ukuqeqeshwa kwezemidlalo phantsi kweemeko. Ababhalisi bakhawuleza bathululela isilwanyana ngokuncoma, apho iGlukoza, ngokuthe tye, kwaye wabalwa:
vlasova2306 Ewe, ufumana isohlwayo kuwe! Okanye unokucela ukuncoma! Kwabaqalayo, into ibonisa!
i.bahareva63 Ifom enayo iphezulu kakhulu, kodwa izinga lokusebenza kweasanas, izinga liqhubekile))
lina_the_best_murak Unomfanekiso we-chic! Nguwe kuphela onokumona!
Umyalelo wemihla kunye neempawu zokutya komculi we-Glucose
Ukuze ufezekise le miphumo, uNatasha unesithukuthezi esikhulu. Umdlali we-actress unikeza ixesha lakhe ixesha lemidlalo kwaye uhlala e-yoga, i-pilates kunye noqeqesho olusebenzayo. Ukongezelela, uhamba kakhulu ngexesha lokwenza umsebenzi kwisigaba kunye nokuhlaziya kwi-ballroom. Ukongeza, umculi uyayilumkisa ngokutya kwakhe kwaye anamathele kwinkqubo ethile ekudleni.
UNatasha uqala usuku lwakhe ngeglasi yamanzi afudumele kunye nemon nge-esiswini esingenanto. Ukuba i-yoga inikelwa kuye ekuseni, akayidli isidlo sakusasa. Ukuba kukho ukuqeqeshwa ngomthwalo, ukutywala kunye ne-gluten-free free flakes kunye ne-yogurt ye-soybean kwaye uphuze i-smoothies kwikhokoni okanye ubisi lwe-almond ngebhanana. Kwesidlo sakusasa, umculi ukhetha ukucwenga i-casserole, i-porridge, i-syrniki, i-omelette okanye amaqanda aqhotyoshelweyo-konke ngaphandle kwe gluten kunye ne-lactose. Umculi weDinner uzama kungekudala kweeyure ezingama-15, ukhetho luyakunikwa intlanzi kunye nemifuno. Ukutya isidlo sesidlo esikhulu sikaNatasha, ngoko uzama ukuxhomekeka kakhulu kwiintlanzi, ukutya kwezilwanyana zasemanzini kunye nealadi zemifuno. Ngexesha elifanayo, akayikuzikhanyela ukuzonwabisa ngenxa yokulahleka ingilazi yewayini elomileyo. Umculi uzama ukusebenzisa i-dessert kuphela ukuya kwiiyure ezingama-19, kwaye kunye nokutya okutyhutyayo ngendlela yemantambo nezithelo kuphelile ukutya.
Iimpawu kunye nesondlo esifanelekileyo kwi-urolithiasis
I-pastes yangempela kunye nekhefu
Izinzuzo kunye neentlungu zeCocoa
Ukutya okunobungozi kakhulu kwihlabathi
Iipropati ezisebenzayo ze-asparagus
I-pike ipaki ekubetheni
I-Horoscope ngoFebruwari 2018 - Owesifazane waseSagittarius-ukusuka eTamara Globa no-Angela Pearl
Izilwanyana zasekhaya - izilwanyana ezimangalisayo
I-sauna yaseFinnish: izakhiwo ezixhamlayo zomzimba
Ithetha ngokuchasene nokuxubana kwamanzi
Izixhobo zengubo emnyama
Cake Pancake Cake
Isifo esisisifo esisisifo esasisandul 'ukuzalwa
Ikhekhe elibomvu i-currant
UOlga Buzova wamemezela umtshato wakhe ozayo
Itiye ye-lemon yamahlathi (i-Ice Tea)
Iibhekebhe ngeeshizi kunye nemifuno
Ikhekhe le-lemon kwi-glaze
Iziphazamiso zemifuno, iintlungu zomzimba
USergei Shnurov wakhalaza ngexabiso eliphezulu "